Ny ankamaroantsika dia efa namaky Baiboly nandritra ny taona maro. Tsara ny mamaky ireo andinin-tsoratra masina mahazatra ary aforeto ao toy ny lamba firakotra mafana izy ireo. Mety hitranga ny antony mahatonga antsika tsy hahafantatra ireo antsipiriany lehibe. Raha mamaky azy ireo amin'ny masontsika sy amin'ny fomba fijery vaovao isika, ny Fanahy Masina dia afaka manampy antsika hahita bebe kokoa ary mety hampahatsiahy antsika ireo zavatra hadinontsika. Raha toa aho ka…
Teo am-pihainoako ny hiran'i Billy Joel «State of Mind New York» herinandro vitsy lasa izay raha teo am-panaovako ny vaovao momba ny Internet aho dia nanjary nahatsikaritra ny lahatsoratra manaraka. Manazava izany fa ny fanjakan'i New York dia vao namoaka lalàna izay mandrara ny fanaovana tatoazy sy ny fanindrona ny biby fiompy. Mampientanentana ahy ny mahafantatra fa ilaina ny lalàna toa an'io. Toa zary lasa fironana ity fomba fanao ity. Mino aho fa ...
Imbetsaka i Paoly no nilaza fa ny Romana dia milaza fa tokony ho amin'i Kristy isika fa Andriamanitra dia mihevitra antsika ho marina. Na dia manota aza isika indraindray, ireo fahotana ireo dia isaina amin'ilay taloha niaraka nohomboana tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana; ny fahotantsika tsy miankina amin'ny toetrantsika ao amin'i Kristy. Adidintsika ny miady amin'ny ota - tsy ny ho voavonjy, fa satria efa zanak'Andriamanitra isika. Ao amin'ny tapany farany amin'ny Toko 8 ...
Efa naheno ve ianao fa ny fahasoavana dia voalaza fa "tsy misy fetra" na "mitaky fangatahana izany". Ireo izay manasongadina ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famelan-keloka dia hihaona indraindray amin'ny olona izay miampanga azy ireo ho "fahasoavana mora", araka ny iantsoana azy ireo tsy misy dikany. Tena io no nitranga tamin'ny namako malala sy pasitera GCI, Tim Brassel. Voampanga ho nitory “fahasoavana mora” izy. Tiako ny fomba izy ...
Ny fanamarinana dia asan’ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy sy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, izay hanamarinana ny mino eo imason’Andriamanitra. Noho izany, amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy no ahazoan’ny olona famelan-keloka avy amin’Andriamanitra, ary mahita fiadanana amin’ny Tompo sy Mpamonjy azy izy. Kristy no taranaka ary ny fanekena taloha dia lany andro. Ao amin’ny fanekena vaovao, ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra dia miorina amin’ny fototra hafa, miorina amin’ny fifanarahana hafa. ( Romana 3:21-31; 4,1-8e;…
Vao tsy ela aho dia nahita horonantsary iray izay manala ny varotra amin'ny fahitalavitra. Tamin'ity tranga ity dia momba ny CD kristiana foronina iray izay mitondra ny lohateny hoe "It All About Me". Ahitana ny hiran'ny CD ny hira: "Tompo aho manandratra ny anarako any ambony", "manandratra ahy" ary "tsy misy tahaka ahy". (Tsy misy tahaka ahy). Strange? Eny, maneho ny fahamarinana mampalahelo izany. Isika olona mirona ho antsika ...
Te ho olona manam-pinoana ve ianao? Te hanana finoana afaka mamindra tendrombohitra ve ianao? Te handray anjara amin'ny finoana afaka mamelona ny maty ve ianao, finoana toa an'i David afaka mamono olona goavambe? Mety misy goavambe marobe amin'ny fiainanao tianao potehina. Izany no zava-misy amin'ny ankamaroan'ny Kristiana, ao anatin'izany aho. Te ho tonga goavan'ny finoana ve ianao? Vitanao io fa vitanao ...
Nampiasa fomba fitenenana i Billy Graham handrisihana ny olona hanaiky ny fanavotana ananantsika ao amin'i Jesosy: Hoy izy hoe: "Ho tonga ihany ianao!" Mampahatsiahy fa mahita ny zava-drehetra Andriamanitra: ny tsara indrindra sy ratsy indrindra. ary mbola tia antsika izy. Ilay antso hoe "mba ho tonga tahaka anao ihany" dia taratry ny tenin'ny apostoly Paoly hoe: "Satria maty ho antsika Kristy tamin'ny fotoana nampahalemy antsika. Eny ary ...
Ny tantara iray ao amin'ny Testamenta Taloha dia nahaliana ahy manokana. Ilay mpilalao sarimihetsika lehibe dia antsoina hoe Mefi-Boscheth. Ny olon'ny Isiraely, ny Isiraelita dia miady amin'ny Filistina fahavalony lehibe indrindra. Nandritra io toe-javatra manokana io dia resy izy ireo. Maty i Saoly Mpanjakan'izy ireo sy Jonatana zanany. Tonga hatrany Jerosalema renivohitra ny vaovao. Raikitra ny fikorontanana sy ny savorovoro ao an-dapa satria fantatra fa raha maty ny mpanjaka dia ny ...
Toa tena marina ilay izy, ka manomboka ny laza malaza ary fantatrao fa toa tsy dia tanterahina izany. Fa raha toa ka tonga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra dia tena marina izany. Na izany aza, misy ny olona manizingizina fa ny fahasoavana dia tsy azo atao ary mampiasa ny lalàna hialana amin'izay hitany fa fahazoan-dàlana hanota. Ny ezaka ataonao tamim-pahatsorana nefa diso dia toa endrika ara-dalàna omena ny olona ny herin'ny fahasoavana manova ...
Na dia vao 12 taona monja aza aho tamin'izay fotoana izay dia mbola tadidiko tsara ny raiko sy ny raibeko, izay tena faly tamiko satria nitondra ny `` '' rehetra (ny naoty tsara indrindra) tao an-trano. Ho valisoa, nomen'ny raibeko kitapom-boankazo alligator lafo vidy aho, ary nomen'ny raiko vola 10 $ ho tahiry. Tsaroako izy roa lahy nilaza fa ...
Ao amin’ny tantaran’i Les Miserables (Ilay Ory), rehefa nivoaka ny fonja, i Jean Valjean dia nasaina ho any amin’ny tranon’ny eveka iray, nomena sakafo sy efitra iray ho an’ny alina. Nandritra ny alina dia nangalatra ny volafotsy i Valjean ary nandositra, saingy tratran'ny zandary, izay nitondra azy niverina tany amin'ny eveka niaraka tamin'ireo entana nangalarina. Raha tokony hiampanga an’i Jean ny eveka dia nanome fanaovan-jiro volafotsy roa izy ary namoha ny ...
Ny hoe miaina amin’ny fahasoavana dia midika fandavana, tsy fandeferana, na fanekena ota. Manohitra ny ota Andriamanitra - halany izany. Tsy nety nandao antsika tao anatin’ny fahotana izy, ary naniraka ny Zanany mba hanavotra antsika amin’ny vadiny sy ny vokany. Rehefa niresaka tamin’ny vehivavy nijangajanga i Jesosy, dia hoy izy taminy: “Izaho koa tsy mitsara anao”, hoy i Jesosy namaly. Afaka mandeha ianao, fa aza manota intsony!” (Jo 8,11 HFA). Ny tenin'i Jesosy...
Ny fahasoavan’Andriamanitra dia ny fahasoavana tsy manam-paharoa izay tian’Andriamanitra homena ny zavaboariny rehetra. Amin'ny heviny midadasika indrindra, ny fahasoavan'Andriamanitra dia aseho amin'ny asa rehetra maneho ny tenany avy amin'Andriamanitra. Noho ny fahasoavan’ny olombelona sy ny tontolo rehetra dia voavotra amin’ny ota sy ny fahafatesana amin’ny alalan’i Jesosy Kristy, ary noho ny fahasoavan’ny olona dia mahazo hery hahalalana sy ho tia an’Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary hiditra ao amin’ny fifaliana amin’ny famonjena mandrakizay ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. (Kolosianina 1,20;…
Mbola misy ihany ny herinandro vitsivitsy mankalazantsika ny fahafatesan'i Jesosy sy ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Zavatra roa no nitranga tamintsika rehefa maty Jesosy ary natsangana. Ny voalohany dia niara-maty taminy isika. Ary ny faharoa, dia niara-natsangana taminy isika. Ny apostoly Paoly dia nametraka izany toy izao: «Raha atsangana ankehitriny miaraka amin'i Kristy ianao, tadiavo ny any ambony, izay misy an'i Kristy, mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Katsaho izay ety ambony fa tsy izay et earth an-tany. ...
Indraindray aho mahare ahiahy fa apetrakay loatra ny fahasoavana. Raha fanitsiana natokana dia azo lazaina fa, amin'ny tsy fitovian'ny fampianarana momba ny fahasoavana, azontsika dinihina ny fankatoavana, ny fahamarinana ary ny andraikitra hafa voalaza ao amin'ny Soratra Masina, ary indrindra ao amin'ny Testamenta Vaovao. Izay rehetra matahotra ny "fahasoavana be loatra" dia manana olana ara-dalàna ... ...
Moa ve ny lalana rehetra mankany amin'Andriamanitra? Misy ny mino fa ny fivavahana rehetra dia miovaova ny lohahevitra iray ihany - ataovy izany na mankany an-danitra. Raha vao zatra manomboka dia toy io ilay izy. Ny Hindoa dia nampanantena ny firaisan'ny mpino iray amin'andriamanitra tsy mitovy. Ny fidirana amin'ny nirvana dia mitaky asa tsara mandritra ny fahaterahana marobe. Ny Buddhisme, izay mampanantena ihany koa nirvana, dia mangataka ny fahamarinana efatra lehibe sy ny lalana valo valo
Taitra noho ny fahasoavana tena izy. Ny fahasoavana dia tsy miala amin'ny ota, fa ny mpanota no manaiky. Izany dia anisan’ny toetry ny fahasoavana izay tsy mendrika anjarantsika. Manova ny fiainantsika ny fahasoavan'Andriamanitra ary izay no tanjon'ny finoana kristiana rehetra. Betsaka ny olona mifandray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no matahotra tsy ho eo ambanin'ny lalàna. Mihevitra izy ireo fa hahatonga azy ireo hanota bebe kokoa. Tamin'izany fomba fijery izany dia i ...
Ny psikology iray antsoina hoe Lawrence Kolberg dia nanao fitsapana be dia be mba hamerana ny fahamatorana eo amin'ny sehatry ny fisainana ara-moraly. Nofeheziny fa ny fitondran-tena tsara hisorohana ny sazy no endrika farany ambany manosika hanao ny tsara. Moa ve isika manova ny fitondran-tena mba hialana amin'ny fanasaziana? Toa izany ve ny fibebahana kristianina? Ny Kristianisma ve dia iray amin'ireo fomba maro hitadiavana fampandrosoana? Betsaka ny kristianina ...
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe ahoana no nilazan'i Jesosy fa ny ziogany dia nalemy fanahy ary maivana ny enta-mavesany, rehefa dinihina izay niaretany ho Zanak'Andriamanitra tonga nofo nandritra ny fiainany teto an-tany? Teraka tamin'ny naha-Mesia nambara mialoha azy, dia nitady azy i Heroda Mpanjaka fony izy zazakely. Nasainy novonoina ny zazalahy rehetra tao Betlehema, roa taona no ho midina. Fony mbola tanora i Jesosy dia toy ny tanora rehetra ...
Efa nijery mpanefy tanimanga tany am-piasana ve ianao na naka kilasy fanaovana vilany? Nitsidika toeram-pamokarana vilany iray i Jeremia mpaminany. Tsy noho ny fahalianana na noho ny fitadiavany fialam-boly vaovao, fa noho ny nandidian’Andriamanitra azy hanao izany: «Mivoha, ka midìna any amin’ny tranon’ny mpanefy tanimanga; any no hampandrenesako anareo ny teniko.” (Jer 18,2). Efa ela be talohan’ny nahaterahan’i Jeremia dia efa niasa teo amin’ny fiainany tamin’ny naha-mpanefy tanimanga azy Andriamanitra, izany asa izany no mitarika…
Ny iray amin'ireo zavatra sarotra hinoantsika indrindra amin'ny maha-Kristiana dia ny namelany ny fahotantsika rehetra Andriamanitra. Fantatsika fa marina izany amin'ny teôlôjia, fa rehefa misy toe-javatra azo ampiharina isan'andro, dia mihetsika toa tsy izy. Mirona hanao zavatra mitovy amin'ny ataontsika isika rehefa mamela heloka toa antsika rehefa mitsoka labozia. Rehefa manandrana mamoaka azy ireo isika, dia mijanona hatrany ireo labozia na manao ahoana na manao ahoana zava-dehibe andramantsika. Ireo labozia ireo ...
Tsy nisy nikitika ahy nandritra ny dimy taona. Tsy misy olona. Tsy fanahy. Tsy ny vadiko. tsy ny zanako tsy ny namako Tsy nisy nikasika ahy. nahita ahy ianao Niresaka tamiko izy ireo, nahatsapa fitiavana teo amin'ny feony aho. Hitako teo amin’ny masony ny ahiahy, saingy tsy tsapako ny fikasihan-tanana azy. Nangataka izay mahazatra anareo aho, ny fifanomezan-tanana, ny fifihina mafana, ny tehina ny soroka mba hisarika ny saiko na ny oroka...